Kuyancomeka okwenziwa abeMDC kwezemidlalo - Bayede News
Kuyancomeka okwenziwa abeMDC kwezemidlalo
Izinsolo zomsanka: Laguqa iTheku lansondo
Asengene amanzi endlini: ICoronavirus isisemagcekeni
Ongoti bakhomba inxeba elingajuqa elakuleli
Nangu uDuma Pewa ebesimazi
Isililo: Nsizwa Yezinziswa
Inkohlakalo nokukhwabanisa kuguqisa elakuleli kwezezimali – uMakwetu
Luphazamise nemigidi kaNtulikazi ukhuvethe
Kulele kuMpofana ukubambelela noma ukudedela isicoco seligi
UCogta KwaZulu-Natal nezinhlelo zokunqanda iCOVID-19
U-Omar al-Bashir angahle akhashelwe ngabakwabo
Inezingxabo inkohlakalo, uZondo ufuna ukwelulelwa isikhathi
“Ukudunguzela” kukaMsholozi kuzothikameza nezinkantolo
Udlule emhlabeni esakhala ngobulungiswa ubaba kaSenzo
Udlame lobulili: Isibuyele ingulube odakeni kodwa…
OweDA uthi uxoshelwe ukulwa nenkohlakalo
Isivivinyo sabaholi abasha be-IFP siyasondela
USihlalo omusha we-AU nezinhlelo zezomnotho
Kungabe wonke amabhizinisi azosizakala ngoxhaso?
Kukhalwa ngezibalo zabahlomula kuB-BBEE
Izinkantolo zivamisile ukuvuna abathengi uma kuqubuka izinkinga
Madoda ake nithathe izanca niyibambe ekhaleni
Ukuxhamazela kungaholela abafundi eweni
Kuyababa kwaboHlanga embonini kashukela
Inhlangano egqugquzela ubu-Afrika entsheni ilwa nodlame
Ikhumuka amasondo inqola yabezindaba
Akasalanga uKatlego iGomora ihloma ngosaziwayo
UMeyiwa ubona kusenamagebe kwezokuthwebula
Uzimisele ngokuphelela emajukujukwini ezobuciko uSphelele
AMakhosi eNdlu yakwaMandlakazi nokubaluleka kwawo
Inzima indlela eya phambili kuMabhokobhoko
Ukubaluleka kwemidlalo yeProteas e-India
Home » Kuyancomeka okwenziwa abeMDC kwezemidlalo
Ubekelwe umgoga owoMnyango onolimi olumbaxambili
Idinga ukushayelwa ihlombe iMultichoice Diski Challenge (MDC) ngendlela eyenza ngayo izinto. Le ligi edlalwa ngamaqembu amancane alawa agijima ku-Absa Premiership zintathu izinto ezinhle ezenzayo, ukusakaza imidlalo yayo, ukufaka abantu mahhala ezinkundleni nokuyisa imidlalo kobantu. Kule mpelasonto idili lale midlalo lizobe liseMpumalanga Stadium, eHammarsdale, lapho kuzobe kusiphuka khona izidindi kwazise izobe ishube yonke imidlalo. Mine imidlalo ezobanjelwa kule nkundla, kubalwa eyabakhaya baKwaZulu-Natal, abasePitoli nabaseSoweto. Umdlalo ozovula uzoqala ngele-10 kusasa ekuseni lapho kuzotholana phezulu iMamelodi Sundowns Reserve neSupersport United Reserve.
ISundowns Reserve izofuna ukuwunqoba noma ikanjani lo mdlalo kwazise ihlulekile ukuqoqa amaphuzu agcwele ngeledlule njengoba idlale ngokulingana ngegoli elilodwa nhlangothi zombili neHighlands Park Reserve. Ukudlala kwayo ngokulinga kuyenze yanciphisa igebe phakathi kwayo neBidvest Wits Reserve ehleli endaweni yesibili kulogi. Ngokunjalo neSupersport United Reserve iyawafuna amaphuzu agcwele ukuze izoqhubeka nokubalwa namaqembu ayisi-8 aphezulu ukuze izodlala umqhudelwano womkhumulajezi wale ligi obizwa ngokuthi iMultichoice Diski Shield (MDS). Leli qembu lisendaweni yesi-7 ngamaphuzu angama-35 emveni kwemidlalo engama-23, iBrazillians iqhwakele ngamaphuzu angama-54 emidlalweni elinganayo.
Kusasa kusihlwa ku-Absa Premiership, umdlalo ozobe ubhekwe izinkumbi zabalandeli bakanobhutshuzwayo owa- AmaZulu FC neLamontville Golden Arrows. Lo mdlalo uzothi udlalwa izobe isivele iqalile impi emini njengoba ngehora le-12 kuzotholana phezulu AmaZulu FC Reserve neLamontville Golden Arrows Reserve. Ngenxa yemiphumela edlule kanye nendawo olukuyo kulogi uSuthu, luyizimfivilithi kodwa njengoba umdlalo womkhaya uhlezi uba ngohlukile nakulo kulindeleke esifanayo. I-Arrows Reserve ihlezi endaweni ye-13 kulogi, uSuthu kweyesine. NgeSonto kuzovula umdlalo obandakanya iBidvest Wits Reserve neHighlands Park Reserve elele endaweni yesine kulogi ngehora le-11 ekuseni. Lo mdlalo uzoshuba kakhulu njengoba womabili la maqembu edlala ibhola elicokeme ikakhulukazi iZitshudeni (iBidvest Wits). Umdlalo ozovala uzokuba ngelokuqala emini lapho kuzotholana phezulu iKaizer Chiefs Reserve ne-Orlando Pirates Reserve. Kuyinto eyaziwayo ukuthi noma ngabe elinye lala maqembu libhedelwa yizinto kangakanani kodwa uma esebhekene kusiphuka izidindi.
Bayede News Feb 14, 2020
Inkukhu nempaka: Kuminyene utshumo ebuholini bukaHulumeni